सरिता गिरीलाई सांसद पदबाटै बर्खा स्त गरिदै – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/सरिता गिरीलाई सांसद पदबाटै बर्खा स्त गरिदै
सरिता गिरीलाई सांसद पदबाटै बर्खा स्त गरिदै
काठमाण्डु, ३१ जेठ–समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीमाथि कारबाही गर्ने भएको छ ।सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको अध्यावधिक नक्सा अनुसार निशानछापका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव गरेपछि गिरीले उक्त प्रस्ताव खरेजीको माग गर्दै अर्को सं शोधन दर्ता गराइकी थिइन् ।
तर, समाजवादीले भने संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । गिरीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समाजवादी पार्टीले निर्देशन दिएको थियो । पार्टीले प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदासमेत गिरीले अस्वीकार गरेकी छन् ।
समाजवादी पार्टीसमेत एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । समाजवादीका एक नेताले अन्तिम समय सम्म पनि पार्टी ह्वीप नमाने गिरीलाई सां सद सदस्यबाटै हटाउने गरी सिफारिस गर्ने सम्भावना छ ।
अपराह्न १ बजे बोलाइएको संसद बैठकअघि समाजवादीको सं सदीय दलको बैठक बस्दैछ ।
किन बत्ति झ्याप्प झ्याप्प जाँदैछ ? प्राधिकरणले दियो यस्तो स्पष्टीकरण
चन्द्र र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा फहराउदैँ नेपाल एयरलाइन्स यात्रु लिएर अष्ट्रेलिया उड्यो !
कस्तो बिड`म्बना ! एकै परिवा`रका छ जना गुमे, दाग बत्ती समेत दिने कोही बचे`नन्
भगवान जस्तै श्रीमान ! सबैले आस मा’रेकी श्रीमतीलाई यसरी ब’चाए, सलाम छ।